Nchịkọta dị nkenke nke akwụkwọ "El camino" nke Miguel Delibes | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nchịkọta dị mkpirikpi nke akwụkwọ «El camino» nke Miguel Delibes dere
Onye edemede Spanish Miguel Delibes ebe obibi, jikọọ na akwụkwọ gị "Ụzọ ahụ", ezigbo mmadụ na akwụkwọ mmụta. Naturedị nzuzu, omenala ime obodo na ọtụtụ ihe ngosi nke ihe odide mebere ncheta nwata ahụ, bụ nke onye na-akọ akụkọ maara ihe metụtara ya na usoro agile na ụdị jupụtara n'ọdịmma na ịdị nro.
N'isiokwu a, anyị ga-ahụ nchịkọta dị nkenke nke akwụkwọ a "Ụzọ ahụ" nke Miguel Delibes dere, ma n'otu oge ahụ, anyị ga-ese onye edemede ahụ akwụkwọ akwụkwọ Spanish kemgbe n'oge a niile.
1 Onye edemede: Miguel Delibes
2 «»Zọ»: Nchịkọta nkọwa
2.1 Daniel obere ikwiikwii
2.2 Ndị enyi atọ ahụ
2.3 La Mica na Mariuca-uca
2.4 Mberede dị egwu
Onye edemede: Miguel Delibes
Enwere ike ịmepụta Miguel Delibes na oge edemede nke kwekọrọ na afọ n'etiti 40 na 50s. N'oge a, akwụkwọ akụkọ ahụ bidoro ọzọ mgbe agha obodo Spanish gachara ma gosipụta ka ọ bụrụ ụdị dabara adaba iji gosipụta ihe niile mere n'oge esemokwu obodo a na afọ ndị na-abịanụ, ya bụ, ọnọdụ mmekọrịta ọha na eze jọgburu onwe ya na mba ahụ.
Miguel Delibes ebe obibi amụrụ na Valladolid na 1920. Ọ ibido itinye onwe ya na azụmahịa na iwu, ọmụmụ na ọ gara nke ọma dechara, na-aghọ Prọfesọ nke Iwu Azụmaahịa na Schoollọ Akwụkwọ nke Azụmaahịa nke otu Valladolid. Mgbe e mesịrị ma na ijikọta, ọ raara onwe ya nye akwụkwọ akụkọ, ọbụna ghọọ onye nduzi nke akwụkwọ akụkọ "North nke Castile".
Mana anyị agaghị ezute ndị edemede Delibes ruo mgbe afọ 1947 nyere ihe ọ bụla ọzọ na ọ dịghị ihe na-erughị Onyinye Nadal maka Akwụkwọ maka ọrụ ya "The onyinyo nke cypress na elongated", otu n’ime ndị kasị mara amara nke na-ede akwụkwọ. Ọrụ a na-akọ ụfọdụ nchegbu dị adị dị ka ihe gbasara ọnwụ na / ma ọ bụ enweghị obi ụtọ.
Site na ọrụ ya nke ebipụtara na 1950, "Ụzọ ahụ", ọrụ nke anyị ga-achịkọta nkenke n'okpuru, Delibes na-ebido ịbịaru obodo nso, nke ọrụ ndị ọzọ ga - esochi "My arụsị nwa Sisi" o "Diary nke dinta".
Miguel Delibes nọ n'ọkwá ndị kacha elu nke Spanish akwụkwọ akụkọ. Banyere echiche ya, ya onwe ya gosipụtara onwe ya dị ka Christian humanist nyefere nsogbu nke oge ya na imegide bourgeois ọha mmadụ. Ihe di iche na ndu ndi bourgeois na ime obodo aburula ihe ntughari aka otutu otutu akwukwo ya. Ọ bụrụ na anyị elee anya na usoro ya dị ka onye edemede, Delibes nwere ọpụrụiche àgwà dị ka akụkọ akụkọ tinyere ike dị egwu iji gosipụta ụdị gburugburu dị iche iche. E wezụga nke ahụ, o nwere asụsụ pụrụ iche nke asụsụ anyị.
N’ụzọ dị mwute, ọ hapụrụ anyị ihe dịka afọ asatọ gara aga, ọkachasị na Machị 8, 12.
«»Zọ»: Nchịkọta nkọwa
Na-esote, anyị ga-eji nkenke akụkọ banyere ibé akwụkwọ «El camino», nke Miguel Delibes dere.
Daniel obere ikwiikwii
Daniel bụ nwa nwoke iri na otu nke ọ maara dị ka Little Owl. Ọ nọ n’elu akwa na-eche maka njem ọ ga-eme n’echi ya iji bido agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ sekọndrị n’obodo ahụ.
Ndị enyi atọ ahụ
N'abalị, Daniel chetara oge ọ bụ nwata n'etiti ndị bi na ndagwurugwu: onye ụkọchukwu, onye nkụzi, onye ọrụ ọkpụzi, ndị ọrụ telifon ... Ebe dị mkpa kwesiri ka Daniel na ndị enyi ya atọ gbapụ na mgbapụ: Roque, el Moñigo na Germán, el Tiñoso.
La Mica na Mariuca-uca
Nakwa akụkụ nke ncheta ya, mmekọrịta ya na Mariuca na Mica nwere. Nke ikpeazụ, Mica, bụ nwa agbọghọ dị afọ iri karịa Daniel, onye ọ hụrụ na ọ hụrụ ya n'anya n'ezie. Otu ụbọchị, Daniel gara n'ụlọ Mica iweta chiiz ụfọdụ na nloghachi ya zutere Mariuca. Ọ na-ekwusi ike na-ajụ ya ihe kpatara ọ jiri maa mma nke ukwuu iji were ụfọdụ chiiz na Mica, ihe kpatara o jiri were ogologo oge, wdg. Mariuca hụrụ Daniel n'anya, agbanyeghị na mkparịta ụka a, o mere ka o doo ya anya na ọ dị njọ mgbe Mica bụ nwa agbọghọ mara mma n'obodo. Mariuca ama atuak ada atua eyet.
Otú ọ dị, Daniel ga-achọpụta n'oge na-adịghị anya na Mica nwere enyi nwoke na nna Mariuca kpebiri ịlụ di ọzọ. Ozugbo ọ matara nke ikpeazụ, ọ na-amalite inwe obi ọmịiko maka nwa agbọghọ ahụ, onye, ​​dị ka ya, aghaghị ịnakwere akara aka ya.
Mberede dị egwu
Oge ikpeazụ Daniel nọrọ n’obodo ahụ tupu ọ gụọ akwụkwọ n’obodo ahụ bụ ihe ọghọm dị egwu nke enyi ya Germán. Site mgbe ahụ gaa n'ihu, Daniel chere na ihe dị ukwuu 'ekpuchiri' n'ime ya nakwa na site ugbu a gaa n'ihu, ọ dịghị ihe ga-adị ka ọ dị n'oge ahụ.
Mgbe chi bọrọ, Daniel matara na ya hiri ụra abalị dum na-echeta ibe ya oge ochie na obodo ya nakwa na oge eruola ịbịaru ọpụpụ ya dị nso.
Ọ bụrụ na-amasị gị Miguel Delibes, "Ụzọ ahụ" bụ otu n'ime ọrụ ya kachasị mma "The onyinyo nke cypress na elongated". Enweghị ike ịla n'iyi na mkpokọta agụchara gị. Ukwuu na-atụ aro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Nchịkọta dị mkpirikpi nke akwụkwọ «El camino» nke Miguel Delibes dere
Ihe ngosi dijo
Edgar Allan Poe. Afọ 209 mgbe a mụsịrị ya. Fọdụ n'ime ahịrịokwu ya
Maria Goodin Onye edemede nke otu ejije?